समाज::Nepal's Digital Paper
वडाध्यक्षको फर्जी हस्ताक्षर गरेको अभियोगमा एक व्यक्ति पक्राउ, पढ्नुहोस
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १६ का वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालको फर्जी हस्ताक्षर गरेको अभियोगमा प्रहरीले मंगलबार एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा नयाँबजार खुसीबुस्थित अटोपार्टसका कर्मचारी रविन खत्री रहेका छन् । आर्थिक...
को हुन् ति पापी बुबा जसले चक्कु प्रहार गरेर आफ्नै गर्भवती छोरीको हत्या गरे !
एजेन्सी । भारतमा एक व्यक्तिले चक्कु प्रहार गरेर आफ्नै गर्भवती छोरीको हत्या गरेका छन् । भारतको उत्तरप्रदेशकी एक गर्भवती छोरीलाई मुम्बईमा उनकै बुवाले हत्या गरेका हुन् । २० वर्षकी मीनाक्षी चौरसियाको उनकै बाबुले चक्कु...
अविरल वर्षाका कारण मुलुकभर बाढी पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ७८ पुग्यो , ३२ जना बेपत्ता ,पढ्नुहोस्
काठमाडौं । छ दिनदेखि लगातार परेको अविरल वर्षाका कारण मुलुकभर ७८ जनाको मृत्यु भएको छ । गृह मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म विभिन्न जिल्लामा ७८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ३२ जना बेपत्ता...
लुम्बिनी मेडिकल कलेजबाट जन्मेको ४ घण्टामै नवजात शिशु चोरी ? चोर्नुको मुख्य रहस्य बाहिरियो ….
पाल्पा। शुक्रबार पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेजबाट जन्मेको ४ घण्टामै नवजात शिशु चोरी भयो । यो चोरीले त्यस क्षेत्रमा हंगामा मच्चायो । कसले चोर्यो ? किन चोर्यो ? कहाँ लिएर गयो ? जस्ता अनेकौं प्रश्न...
अविरल वर्षाको कारण बाढी तथा पहिरोमा परी ज्यान गुमाउनेको संख्या ३० पुग्यो , कुन जिल्लामा कति क्षति ? हेर्नुहोस्
२८ असार, काठमाडौं । अविरल वर्षाको कारण विभिन्न स्थानमा आएको बाढी पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ३० पुगेको छ । १८ जना बेपत्ता भएका छन् भने १२ जना घाइते भएका छन् । बाढी पहिरोमा परी...
यस्त्तो हालतमा चिप्लिएको भेटियो चिप्लिएको एयरलाइन्सको जहाज,धन्न कसैलाइ केहि भएन (तस्बिर)
२७ असार, काठमाडौं । धावनमार्गबाट चिप्लिएको यती एयरलान्सको विमानका कारण त्रिभुवन विमानस्थल अझै अवरुद्ध छ ।विमानस्थल कार्यालयले २ बजेसम्म विमान हटाइसक्ने भने पनि अहिलेसम्म काम सकिएको छैन । विमानलाई धावनमार्ग छेउबाट हटाउनका लागि विमानस्थल कार्यालय,...
अविरल बर्षाका कारण भत्कियो सिंहदरबारको पर्खाल, सवारी आवत जावतमा समस्या
काठमाडौं । बिहीबार साँझदेखि परिरहेको अविरल बर्षाका कारण सिंहदरबारको पर्खाल भत्किएको छ । बर्षाका कारण शुक्रबार बिहान सिहदरबारको पर्खाल भत्किएको हो । पर्खाल भत्किँदा बाटोमा हिँडिरहेका एकजना विद्यार्थी सामान्य घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ ।...
२७ असार, काठमाडौं । बिहीबार रातिदेखि मुलुकका विभिन्न स्थानमा परेको अविरल वर्षाका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ । हालसम्म मुलुकका विभिन्न ठाउँमा ६ जनाले जनाले ज्यान गुमाएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालका अनुसार बनेपा–३,...